» खुट्टा भाँचिएका बिरामीलाई ज्वरो देखिएपछि अस्पतालले निकाल्यो
१२ चैत्र २०७६, बुधबार ०८:५५
रूपन्देही सैनामैनाका २१ वर्षीया अजय सहानी सात दिनदेखि मेडिटेक अस्पताल बुटवलमा उपचाररत थिए। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएका उनमा मंगलबार बिहान एक्कासी ज्वरो आयो। उनको उपचार गरेका अर्थो डा‍. गोपाल ज्ञवालीले ज्वरो आएका बेला शल्यक्रिया गर्न आईसीयू चाहिने भन्दै भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज पठाए।
बिरामी रिफर गर्नुअघि डा. ज्ञवालीले युनिभर्सलका डा. किशोरमान श्रेष्ठलाई अस्वथाबारे जानकारी दिएका थिए। डा. श्रेष्ठले बिरामी भर्ना गर्ने वचन दिए। सहानी मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा पुगेपछि निकालियो। ज्वरो नाप्नेबित्तिकै चिकित्सकले गलहत्याएर निकालेको उनको उपचार गराइरहेका व्यवसायी केशव अधिकारीले बताए।
‘ज्वरो आएको थाहा पाउनासाथ चिकित्सकले कुरुवासहित बिरामीलाई नै धक्काएर बाहिर निकाले’, उनले भने, ‘स्ट्रेचरमा बस्न पनि दिएनन्।’ सहानी र उनका कुरुवा एक घण्टा अस्पताल परिसरमा बसे तर उपचार गरिएन। उनीहरू बुटवलको जेनस अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।
नवलपरासीका एक युवाले हालै उपचारका लागि ६ वटा अस्पतालको फन्को मार्नुपरेको थियो। ज्वरो र खोकी लागेकै कारण उनी उपचारबाट वञ्चित भएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि लुम्बिनी अस्पतालले उपचार थालेको थियो। कोरोना आशंका गरिएका उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उनलाई निमोनिया भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको र २–४ दिनमा डिस्चार्ज गर्ने तयारी रहेको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीका डा. मोहम्मद नुरुल होदाले बताए।
सहानीको उपचारका लागि कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले पहल गरेका थिए। मेडिकल कलेजले उपचार गर्नै नमानेको आफन्तले बताएका छन्। मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत तेज केसीले यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। सूचना अधिकारी सुशील गुरुङले फोन उठाएनन्।
सामान्य ज्वरो आउँदैमा कोरोना संक्रमण नहुने भनिए पनि चिकित्सक नै बिरामीको उपचारमा आनाकानी गरेका छन्। उपचार रोकिएको भन्दै सर्वसाधारण निराश छन्। निजी अस्पतालमा यो समस्या अझै हटेको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
अमेरिकामै किन यति छिटो फैलिँदैछ कोरोना, कहाँ चुक्यो शक्तिशाली देश ?
पर्यटकले ल्याएको कोरोनाले स्पेनमा २४ दिनमै मच्चिएको हाहाकार !
कोरोना भाइरसबारे परामर्श लिनुपरेमा फोन गर्नुस् ११३३ र १११५ मा, पैसा लाग्दैन
स्पेनमा एकै दिन आठ सय ३२ जनाको मृत्यु
मकवानपुरको राक्सिराङमा भोकमरी, गाउँपालिकाद्वारा सहयोगको आह्वान
काठमाडौंपछि आजैबाट धरानमा कोरोना परीक्षण सुरु
विदेशबाट थाहानगर भित्रिएकाहरुको घरघरमै डाक्टर पुगे
थाहानगरमा क्वारेन्टाइन संचालनको अन्तिम तयारी
बागलुङकी युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण
कोरोना त्रासः हेटौँडाका मन्दिरमा ताल्चा,पूजापाठ बन्द
केदार चौलागाईंले दिए वडा कार्यालयलाई आफ्नो सवारी